I-Rose ayiyona ize ngokuthi ikosikazi yezimbali. Nomaphi lapho uyibona khona: ngasemuva, esitokisini ebhaleni, ebhodweni efasiteleni noma ekunqunyweni kwesibhakabhaka - ama-roses ahlale ebheka okumangalisayo. Bathokozisa iso futhi bavele bajabulele umbono wabo wokutshala amahle kanye nama-inflorescences azintandokazi ngobukhulu obuhlukahlukene, ubujamo nemibala, futhi-ke, iphunga eliyingqayizivele lama rose. Izinhlobo zalesi siko sembali kulezo zensimu zanamuhla zimelelwa ezinombolweni ezinkulu, kodwa edolobheni, ama-roses aya ngokuya eyaziwayo endlini, ahlwanyelwe emabhodini futhi angaba umhlobiso omuhle kakhulu we-mini-ingadi yakho efasiteleni.
Ama-roses ekamelo: umsuka wezinhlobo kanye nesici esivamile
Cishe zonke izinhlobo ezincane zama roses zasendlini zangeniswa ekuqaleni kwekhulu le-19 ukusuka eChina. Ziyizihlahla ezivuthiwe ezingaphansi komhlaba ezinezimbali ezide nokuningi. Kunezinhlobo ezingaphezu kwezingu-2000 nezinhlamvu zemithi evulekile. Izinhlobo ezifanele ukukhula ezimweni zegumbi zinomumo omile, ohlangene wesihlahla kusuka ku-15 kuya ku-50 cm ukuphakama. Kukhona izimpande zezitshalo, ezikhulile ezivela ku-cuttings, futhi zihlanganisiwe emaqhweni asozini. Abangaphambili bahlala isikhathi esifushane futhi bengenakuzithoba ekunakekeleni, kuyilapho lesi sikhashana sikhula futhi sidinga ukunakekelwa nokunakekelwa okungaphezulu. Izimbali egumbini zinezitshalo ezikhanyayo, ziphunga iphunga elimnandi, ziyi-2-5 cm ngaphesheya, zingabekwa yedwa ehlathini noma ziqoqwe zibe yi-inflorescence ye-racemose, zingabashadile, ziphindwe kabili futhi zibe zimibalabala ezimbili, i-monochromatic ne-mottled.
Izinhlobo ze-roses zasendlini
Namuhla ezitolo zezimbali zitholakala ezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo zama roses ezincane. Njengomthetho, konke kutholakala ngenxa yokuwela insimu ejwayelekile ejwayelekile ne-Chinese encane. Okubomvu, i-carmine, i-pink, ukhilimu, i-orange ephaphathekile, emhlophe neyomuthi, i-monochrome futhi ihlangene - kusukela enombolweni yemibala ekhonjisiwe, amehlo avele abaleke.
I-bush bush encane imnandi kakhulu, enamaqabunga amancane aluhlaza okwesibhakabhaka amnyama. Izimbali nazo ziyingcosana, i-terry, ziqoqwe kwi-inflorescence futhi azilahlekelwa izindawo zazo zokuhlobisa phakathi nesikhathi sokuqhakaza kusukela ekuqaleni kwentwasahlobo kuze kube sekupheleni kwehlobo.
Le rose, ohlobo lwayo oluhlwanyelwe ngezimo zasendlini ngokuwela i- rose rose ne-garden, itiye izimbali ezingavamile futhi ezimnandi, nokho, kanye nabazala bomude abade. Ama-hybride adume kakhulu yiLa France, uJules Boucher, Gruss noTeplitz, Miss Rowena Tom.
Loluhlobo lwama-roses asendlini lungenakuzithoba kakhulu ekunakekeleni. Akadingi "ukuphumula", ukuze ukwazi ukujabulela izimbali ezimnandi cishe unyaka wonke. Izihlahla ze-Bengal rose, izinhlobo zazo ezingaba nombala obomvu, obomvu noma obomhlophe we-inflorescences, ohlangene kakhulu, ngobuningi bamaqabunga amancane bese ufinyelela ukuphakama kwama-50 cm kuphela.
Lolu hlobo lwama-roses asendlini luyatholakala ngama-hybrid crosses we-rose-ligated multi-flowered garden roses. Izinhlobonhlobo ezidumile kakhulu ezihamba phambili ziyi-Red Triumph ebomvu, i-pink Clotilde Super, futhi i-Miniatures ne-pink double noma izimbali ezimhlophe.
Namuhla, konke mayelana ne-roses yasendlini (izinhlobo, izithombe kanye nemininingwane ehlukahlukene yokuzalanisa) kungatholakala ezitolo zezimbali. Uma i-rose encane ivela endlini yakho, ungakhathazeki ukuthi awukwazi ukubhekana nayo futhi ayikwazi ukuyihlinzeka ngokunakekelwa okufanele. Uma uthanda ngempela izindlu zendlu, uzophumelela!
Gennady Padalka: Biography of-astronaut
Indlela ukuqeda izakhiwo: Amathiphu isazi sokusebenza kwengqondo